သူမရဲ့ … | Layma's World
« အစား.. အသောက်… ကမ်းနား သစ်ပင် »
SoeMoe, on November 4, 2008 at 12:52 pm said:
ဟားးးးးးးးးးးးးးးးးးးးး ထင်တယ်ဖြစ်ရမယ်..အရေးသားကတော့စွဲဆောင်တယ်….သူမနဲ့ ကျွန်တော်…..
sin dan lar, on November 4, 2008 at 1:36 pm said:
သားကြွက်, on November 4, 2008 at 2:02 pm said:
တီကြွက်…မကြီးမငယ်နဲ့ဂိမ့်ဆော့နေတယ်ပေါ့လေ ဆြာလည်း ခုတစ်လော ဂိမ်းပဲဆော့နေတယ်တဲ့ 😛
သီဟညိမ်း, on November 4, 2008 at 3:48 pm said:
အမလေးမကတော့လုပ်ချလိုက်ပြီ ဖတ်လာတာ mode အပြည့်နဲ့ စိတ်ထဲကတော့
အော်ငါနဲ့တော်တော်ဆင်တဲ့ ဇတ်လမ်းလေးပေါ့ အောက်ဆုံးလဲရောက်ေ၇ာ
သေစမ်းဟဲ နန္ဒီယ ဖြစ်တော့တာပဲ ဆေးတစ်ရူပေးပါရှင် မဟုတ်တော့ဘူးအမရ
ဆေးတစ်ရှင်ပေးပါရှူဖြစ်သွားတယ် mode ပျက်တယ်ဗျာ အဟီးးးးးးးး
အရေးကောင်းလိုက်တာ အမလေးမ ပို့စ်တွေဖတ်လို့ကောင်းတယ်
THS, on November 4, 2008 at 4:06 pm said:
အထီးအမ ဘီလိုခွဲလိုက်ပါလိမ့် 😛
မွန်, on November 4, 2008 at 8:44 pm said:
သူမရေ သူ့ကိုရိုက်လားပုတ်လားတော့ မလုပ်ပါနဲ့ကွယ်
ကြားဖူးတာတော့ သူမှတ်ထားတာတွေပျောက်သွားရင် ကိုယ်ခံစားရတဲ့ stress က
အသည်းကွဲတဲ့ stress ထက်ကြီးမားသတဲ့နော်
သူ့ခမျာလည်း တနေရာနဲ့တနေရာသွားတာကြာပေမပေါ့ အဲဒီ့မှာက လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးကကောင်းဘူးလေ ခွင့်လွှတ်လိုက်နော်
ဪ မမ ပြောစရာရှိတယ် မွန့်မေးလ်လေးအက်ထားပေးပါလား natthimilay@gmail ပါ
ပြီးရင် သူ့ကိုမွန့်ဆီလိုက်ပို့ခိုင်းပေါ့ နော်
winkabar, on November 5, 2008 at 5:22 am said:
ဘယ်သူလဲသိသွားတော့ ရယ်လိုက်ရတာ။ ဟုတ်သားပဲနော် ကွန်ပျူတာဆိုတာ အဲလိုကိုး 😛 ။ ရေးတတ်တယ် အစ်မရယ်။
အချစ်မဲ့ ဂစ်တာ, on November 5, 2008 at 11:32 am said:
မထင်မိဘူးဗျို့.. ကောင်းသဗျာ..။ ဘာညာဇတ်လမ်းလေးမှတ်နေတာ..။ 😛
ဝေလေး, on November 6, 2008 at 10:06 am said:
ဟဲ… စိတ်ဝင်တစားဖတ်နေတာ။ဘယ်သူများလည်းလို့ …. သူကိုးးး 😛 😛
nu-san, on November 6, 2008 at 11:22 am said:
ဖတ်ရင်းနဲ့ ဘယ်သူ့ကိုများပြောနေတာလည်းလို့.. နောက်ဆုံးကျမှ အရှိုက်ထိသွားတော့တယ်.. သူဆိုလို့ ကောင်းကင်ကြီးလားလို့ပေါ့.. ဟွန်း.. တော်တော်ဆိုး.. 😛 ညီမလေးက အဲဒီလို စာရေးကောင်းလို့ ခိုက်နေရတာ.. 😀
MhawSayar, on November 6, 2008 at 12:54 pm said:
ဘာမှသိပ် ထွေထွေထူးထူး ပြောစရာ မရှိဘူးဗျ။ တစ်ခုပဲ . “မိုက်တယ်” လို့. 😀
ဒါကြောင့်လည်း မလေးမ ဖြစ်နေတာကိုး။
ညိမ်းညို, on November 7, 2008 at 9:08 pm said:
ကျနော်ကတော့ ကွန်ပျူတာဆိုတာ ကြိုသိသဗျ 🙂
အဟီး မောက်စ်ကိုဆွဲချလိုက်တာ အရှိန်လွန်ပီး အောက်ဆုံးစာကြောင်းကို
ShwunMi, on November 9, 2008 at 11:22 pm said:
🙂 အရေးအသား ကောင်းတယ်နော.. မလေးမ..
ကိုကောင်းကင်ကြီး မနာလိုဖြစ်ပြီး လွှင့်ပစ်နေဦးမယ်။.. သတိထားဦး။
mtj, on November 15, 2008 at 12:46 pm said:
လေးမရဲ့ သူ နဲ့ ကျွန်တော်ရဲ့ သူမ ကို မိတ်ဆက်ပေးရမယ် ဟဲ…. 😛
ကြေးအိုး, on November 16, 2008 at 4:34 pm said:
နားထောင်နေရင်း ကျွန်တော်ကို ခန့်မှန်းနေတာ။ ချစ်မရဲ့ ကောင်းကင်ကြီးလားလို့။ မဟုတ်လောက်ပါဘူး။ ဟုတ်လောက်ပါတယ်ဆိုပြီး တစ်ယောက်တည်း အတွေးတွေနဲ့ ချာလပတ်အီနေတာ။ နောက်ဆုံးကျမှ ကွန်ပူတာဖစ်နေတာကိုး။ ချီးကျူးတယ်ငါ့အစ်မရေ။